I-RetroPie: jika iRaspberry Pi yakho ibe ngumatshini wokudlala kwakhona | Izixhobo zasimahla
I-RetroPie: jika iRaspberry Pi yakho ibe ngumatshini wokudlala umdlalo
UIsake | | Raspberry Pi
Ukuba unomdla kwimidlalo yevidiyo ye-retro, ezo zodidi zakudala zingaphumiyo kwisitayile, ngokuqinisekileyo ujonge kubo bonke abo banomdla kunye neeprojekthi ezivela kwiRaspberry Pi. Enye yezo projekthi ukonwabela ukuphinda usebenze kwakhona RetroPie, kwaye ndiza kutyhila kuzo zonke izitshixo.
Inyani yile yokuba kukho umdla ngakumbi nangakumbi kolu hlobo lweprojekthi, kuba cUluntu lwabasebenzisi abanomdla ngale midlalo yevidiyo ukusuka kumaqonga adlulileyo akayeki ukukhula. Ngapha koko, abanye abavelisi abanjengo SEGA okanye iAtari bagqibe kwelokuba banike abanye oomatshini babo bangaphambili ithuba lokuhlangabezana nale mfuno ...
Unokuba nomdla wokwazi i- Emulators ezingcono yeRaspberry Pi, kunye nezinye iiprojekthi ezinje Ingxelo yeBox y IBatocera. Kwaye nezinye izixhobo zabalawuli ukwenza ezakho umatshini weArcade.
1 Yintoni iRetroPie?
1.1 Amaqonga abonisa
2 Ndingayifumana njani iRetroPie?
2.2 Fumana iROM
3 Izongezo ezikhoyo
RetroPie yiprojekthi ye umthombo ovulekileyo eyilelwe ngokukodwa ukuguqula i-SBC yakho ibe liziko lomdlalo wevidiyo we-retro, oko kukuthi, umatshini womdlalo wokwenene we-retro. Ukongeza, iyahambelana neebhodi ezinjengeRaspberry Pi kwiinguqu zayo ezahlukeneyo, kodwa nezinye ezinje nge-ODroid C1 kunye neC2, kunye neePC.
Ukusukela kwinguqulelo yeRetroPie 4.6, inkxaso yeRaspberry Pi 4 ikwabandakanyiwe
Le projekthi yakhela kwezinye iiprojekthi ezikhoyo ezikhoyo ezinje Raspbian, EmulationStation, RetroArch, Kodi kunye nabanye ezininzi ezikhoyo. Konke oku kudityanisiwe kwiprojekthi enye esembindini wokubonelela ngeqonga elipheleleyo nelilula ukuze ube nexhala lokudlala imidlalo yeArcade oyithandayo.
Kodwa ukuba ungumsebenzisi ophambili, ikwabandakanya enkulu ezahlukeneyo zezixhobo zokumisela ukuze uguqule kwaye wenze ngokwezifiso inkqubo phantse ngendlela onqwenela ngayo.
I-RetroPie inokulinganisa ngaphezulu kwamaqonga omdlalo wevidiyo angama-50 ungasebenzisa iiROM zemidlalo yabo ukuzihlaziya namhlanje. Ezona zaziwayo zezi:
Inkqubela phambili yomdlalo
Umbala wePocket NeoGeo
ISinclair ZX iSpectrum
Kwaye okuninzi ...
Ndingayifumana njani iRetroPie?
Unako khuphela iRetroPie ikhululekile ngokupheleleyo ukusuka kwiwebhusayithi esemthethweni yeprojekthi. Kodwa ngaphambi kokuba ungene kuyo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba iRetroPie inokusebenza ngeendlela ezininzi:
Yifake kwinkqubo ekhoyo, njengeRaspbian. Olunye ulwazi nge I-Rasbpian y Debian / Ubuntu.
Qala ngomfanekiso weRetroPie ukusuka ekuqaleni kwaye ungeze isoftware eyongezelelweyo.
Ngaphandle kokuguquguquka, amanyathelo ekufuneka elandelwe ukufaka iRetroPie ekuqaleni kwi-SD zezi zilandelayo:
Khuphela umfanekiso de RetroPie ehambelana nohlobo lwePi yakho.
Ngoku kufuneka ukhuphe umfanekiso oxinzelelweyo kwi .gz. Ungayenza ngemiyalelo evela kwiLinux okanye ngeenkqubo ezinjenge7Zip. Isiphumo kufuneka ibe yifayile nge ulwandiso lweimg.
Emva koko sebenzisa inkqubo ethile ukuze ube nakho fometha i-SD kwaye udlulise umfanekiso nguRetroPie. Ungayenza nge EtcherIkwahambelana nazo zombini iiWindows, iiMacOS kunye neLinux. Le yinkqubo efanayo kubo bonke.
Ngoku faka ikhadi le-SD kwi Raspberry Pi kwaye uyiqale.
Nje ukuba uqalise, yiya kwimenyu yokumisela kwicandelo WiFi ukuqhagamshela i-SBC yakho kwinethiwekhi. Qwalasela iadaptha yenethiwekhi yakho ehambelana nayo, kuba unokuba nebhodi endala eneadaptha ye-WiFi ye-USB, okanye unokuba nePi eneWiFi edityanisiweyo, okanye unokudityaniswa ngentambo yeRJ-45 (Ethernet). Kuya kufuneka ukhethe ukhetho lwakho kwaye uqhagamshele kwinethiwekhi yakho yesiqhelo.
Ukuba ukhetha, nangona kungeyomfuneko kwiimeko ezininzi, ungafaka isoftware eyongezelelweyo okanye ii-emulators ezininzi.
Nje ukuba kufezekiswe, oku kulandelayo qwalasela ulawulo lwakho okanye abalawuli bomdlalo, ukuba unayo. Ukwenza oku, amanyathelo ngala:
Qhagamshela abalawuli be-USB onayo. Baninzi abalawuli abahambelana neRetroPie kwiAmazon. Umzekelo QUMOX okanye INEXT.. Unokusebenzisa abanye abalawuli abatsha.
Xa ufakelwe, iRetroPie kufuneka iqalise ngokuzenzekelayo ifayile ye- ujongano ukuziqwalasela. Kuyo, iya kukucela uthotho lwezenzo kumncedisi omele ukulandela. Ukuba wenza impazamo, ungakhathazeki, unokufikelela kwimenyu kamva ukuze uguqule useto ngokucinezela ukuqala okanye nge-F4 kunye nokuqala kwakhona.
Emva koko onokwenza dlulisa iiROM ukuba nemidlalo oyithandayo yevidiyo ekulungele ukubaleka kwiRaspberry Pi yakho. Ungayenza ngeendlela ezininzi, enye ihamba nge-SFTP (inzima ngakumbi), ngeSamba (nayo inzima ngakumbi), kwaye enye isebenzisa i-USB (elula kwaye ekhethwayo ngabona baninzi). Kukhetho lwe-USB:
Sebenzisa i-pendrive okanye imemori ye-USB efomathiweyo ngaphambili kwi-FAT32 okanye kwi-NTFS. Zombini ziyakhonza.
Ngaphakathi kufuneka wenze ifayile ye- incwadi eneenkcukacha ebizwa «retropie» ngaphandle kweempawu zocaphulo.
Ngoku ukhusele ngokukhuselekileyo i-USB kwaye uyibeke kwifayile ye- Izibuko le-USB I-Raspberry Pi. Yishiye ide i-LED iyeke ukudanyaza.
Ngoku nqamula i-USB kwiPi kwakhona kwaye uyibeke kwiPC yakho ukuya dlulisa iiROM ngaphakathi kulawulo lwe-retropie / roms. Ukuba iROM icinezelwe, kuyakufuneka uziphu ukuze zisebenze. Unokwenza iifolda ngaphakathi kwiirom kwiikhathalogu zeROM ngeqonga, umzekelo, unokwenza ifolda ebizwa ngokuba yimidlalo yeNintendo NES, njl.
Xhuma i-USB kwakhona kwiPi yakho, linda i-LED iyeke ukudanyaza.
Ngoku hlaziya i-EmulationStation ngokukhetha ukuqala kwakhona kwimenyu ephambili.
Kwaye ngoku kukho kuphela qala umdlalo… Hi ndlela leyi, ukuphuma kumdlalo otywiliselwe kuwo, ungasebenzisa amaqhosha okuQala nokuCofa acinezelwe ngaxeshanye kulawulo lomdlalo wakho kwaye uza kubuyela kwimenyu ephambili yeRetroPie…
Si awufuni ukubenza nzima ubomi bakho kakhulu kunye neeROM okanye ufakelo lweRetroPie, kuya kufuneka uyazi ukuba sele bethengisa amakhadi e-SD ngale nkqubo ifakiwe, ukongeza kumawaka eeROM esele zibandakanyiwe ...
Umzekelo, ngaphakathi Amazon thengisa enye Ikhadi le-128GB le-MicroSD Umthamo wohlobo lweSamsung kwaye esele ibandakanya iRetroPie, kunye nangaphezulu kwe-18000 yevidiyo zeROM esele zifakiwe.
Khumbula ukuba kunamaphepha amaninzi ewebhu kwi-Intanethi avumela oko khuphela iiROM ngokungekho mthethweni, kuba yimidlalo yevidiyo ephetheyo. Ke ngoko, kufuneka uyenze ngomngcipheko wakho, usazi ukuba unokwenza ulwaphulo-mthetho ngokuchasene nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Ngapha koko, kwi I-Archive ye-Intanethi Unokufumana ezinye iiROM zomdlalo wevidiyo wakudala. Kwaye nawe unayo IiROM ngokupheleleyo kwaye isemthethweni ukuba uyawafuna, njengalawo UMAMA.
Kuya kufuneka uyazi ukuba kukho inani elikhulu le- Iiprojekthi ze-DIY ukwenza owakho umatshini weArcade wexabiso eliphantsi kunye nomncinci kunye neRaspberry Pi, kunye nokuphinda wenze ezinye izinto ezininzi ezidlulileyo ngendlela elula. Ngale nto, iRetroPie ikwabonelela ngamaxwebhu anomdla:
I-DIY yegobolondo ye-acrylic
Kodwa ayisiyiyo kuphela into onayo ezandleni zakho, zikhona kwakhona iikiti ezinomdla kakhulu onokuyithenga ngokudibanisa i-retro console yakho ngendlela elula:
IGeekPi iqokobhe lekhonkco le-retro elingisa iSuperCOM
NESPi Elinye ityala lixelisa iNintendo NES yasentsomini
Owootecc Ityala elinjenge GameBoy-Raspberry Pi Zero
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Raspberry Pi » I-RetroPie: jika iRaspberry Pi yakho ibe ngumatshini wokudlala umdlalo
millis (): yonke into ofuna ukuyifumana malunga nomsebenzi weArduino
I-Odroid N2: enye i-SBC efanelekileyo kwi-Raspberry Pi